China MD-S270 WIRELESS DIGITAL PRESSURE GAUGE ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများ | MEOKON
MD-S270 စီးရီးကြိုးမဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိအားကိုတိုင်းတာရန်ရှန်ဟိုင်း Meokon မှသီးခြားစီတီထွင်ထားသည်။ ဘက်ထရီစွမ်းအင်နှင့်အတူကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်မှု digital ဒီဂျစ်တယ်ဖိအား gauge မှသီးခြားစီတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသည်။
GPRS / LORA / NB-iot multiple transmission options များအပါအ ၀ င်ဒီဂျစ်တယ်ဒီဂျစ်တယ်ဖိအားတိုင်းတာမှုများကိုကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်အမျိုးမျိုးတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ဤထုတ်ကုန်များမှပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောလူမီနီယံအဖုံးနှင့်သံမဏိအဆစ် ၃၀၄ တို့ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်တိကျမှုမြင့်မားသောဖိအားအာရုံခံကိရိယာနှင့် LCD အရည်ကြည်လင်ပြသသောမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်ငွေ့၊ အရည်နှင့်ရေနံတို့မှတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ခြင်းအားတိုင်းတာနိုင်ပြီးအလတ်စားနှင့်လိုက်ဖက်သောအရည်အသွေးများကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရှင်းလင်းခြင်း၊ backlighting၊ ပါဝါဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊
ထုတ်ကုန်များ၏စီးရီးများတွင်အာရုံခံကိရိယာဝယ်ယူမှုအမြန်နှုန်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ တင်ပို့သည့်အကြိမ်ရေကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ မြင့်မားသောနှင့်အနိမ့်သောဖိအားပေးအချက်ပေးတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ အချိန်မှန်ဖိအားနှိုးစက်နှင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိသည်။
MD-S270G သည် GPRS မှထုတ်လွှင့်သောကြိုးမဲ့ဒီဂျစ်တယ်ဖိအားအတိုင်းအတာဖြစ်ပြီးပိုက်လိုင်းဖိအားကိုမိုဘိုင်းသို့တင်ပို့ပေးပြီး China Mobile ၏ရင့်ကျက်သော GPRS ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသူများသည် IP လိပ်စာများနှင့်အခြားအထွေထွေ parameters များကိုကိုက်ညီမှုရှိနိုင်သည်။
MD-S270L သည် LORa ဂီယာကြိုးမဲ့ဒီဂျစ်တယ်ဖိအား gauge ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် LORa တံခါးပေါက်နှင့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသော၊ ရှည်လျားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကွာအဝေး၊ ပြင်းထန်သောအချက်ပြထိုးဖောက်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်စုစည်းထားသောကွန်ယက်တို့၏အားသာချက်များရှိသည်။
MD-S270N သည် NB-iot ကြိုးမဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိအား gauge ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ် NB-iot နည်းပညာ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်မှုစွမ်းအားမြင့်မားခြင်းနှင့်အကုန်အကျနိမ့်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်များသည် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်ပင်ကိုစရိုက်လုံခြုံမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။
၁။ စွမ်းအင်နိမ့်ကျသောဒီဇိုင်း၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်၊ ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည့်သက်တမ်း
၃။ GPRS / LORA / NB - ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်မျိုးစုံ
4. 304 သံမဏိကိုယ်ထည်နှင့် connector ကို, 316L သံမဏိမြှေး, မီဒီယာသဟဇာတ
5. -0.1 ~0... 0.01 0.1 ... 1.6 ... 10 ... 200MPa အပြည့်အဝစကေးလွှမ်းခြုံ
1. အကွိမျမြားစှာဖိအားယူနစ် switching
2. ကြိုးမဲ့ဂီယာ function ကို
၃။ function ကိုပြောင်းပါ
၄။ IP လိပ်စာ၊ အချက်ပြအမှတ်၊ ကြိမ်နှုန်းပို့ခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်ရန်အဝေးထိန်းစနစ် (သို့) ခလုတ်။
၅။ LAN ရှိထိရောက်သောဖိအားစောင့်ကြည့်ခြင်း (LORa) အတွက်တံခါးပေါက်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်
ရှေ့သို့ MD-G501 ​​သေးသေးလေးကြိုးမဲ့ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ
နောက်တစ်ခု: MD-TA ပေါင်းစပ်အပူချိန်လွှဲပြောင်း
Data Logger ဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိအား gauge
Output နှင့်အတူဒီဂျစ်တယ်ဖိအား gauge
high-performance ကို input ကိုအဆင့်အထိအာရုံခံကိရိယာ
MD-HT101 စီးရီးဒီဂျစ်တယ်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆ ...
MD-S628E ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိအား switch